Marvel ugu dambeyntii sharaxaad ka bixisay isku dhafka ku habboon ee gawaarida 'Rakaabka: Endgame' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Marvel ugu dambeyntii sharaxaad ka bixisay isku-dhafka ku habboon ee raadiyaha "Rakaabka: Endgame" - BGR
Marvel ugu dambeyntii sharaxaad ka bixisay isku-dhafka ku habboon ee raadiyaha "Rakaabka: Endgame" - BGR
Waxyaabaha aaladaha isdaba-joogga ahi waxay muujiyeen dhawr bilood ka hor in dhowr qof oo ka badbaaday weerarka waxay u gashaa suudhaadaha cagaarka leh en Dhibbanayaasha: Dhamaadka oo la mid ah kuwa hubka ah ee Hank Pym soo xirtay . ] Ninka iyo geela si aad u hesho dhul wareega. Sheekooyinka si degdeg ah ayaa loo sameeyay hareeraha waxyaabahan ku ciyaaraya kiishashka halka taageerayaasha ay filayeen in geesiyayaashu ay raadinayaan sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen waqtigii loogu tala galay, iyada oo u mahadcelinaysa aqoonta Scott Lang ee aqoonta Pym iyo xajmiga guurka.
The Endgame filim ayaa markaas ku yiri wareysi uu in alaabta lagu darroor laga yaabaa in aanay fikiri lahaa nuqulka ugu dambeeya ee filimka, laakiin in aysan waxba ka beddelin xaqiiqda ah in Lego iyo Hasbro lahaa labada figurines iyo labbisto tirooyinka tallaabo Avengers of dharkoodii Quantum Realm (taasi waa waxa aan ku soo gabagabeynay iyaga oo aan ugu yeereynin sabab la'aan rasmi ah). Wax yar ka dib, Marvel wuxuu sii daayay raadiyaha cusub iyo sawirro cusub Endgame kuwaas oo muujinaya dhowr duuliye oo xiran dhar cad. Hada haddaba waxaan ugu dambayntii sharaxaad ka bixinaynaa hubka cusub. Ka hor intaanad bilaabin, ka taxadar arrintaas Qaar ka mid ah luminta waxay raaci karaan hoos.
Marvel ayaa hoos u dhigtay gawaarida Endgame kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah gawaarida oo xiran dharka cad, oo ay ku jiraan Captain America, Iron Iron, Nebula, Hawkeye, Carmal Black iyo Machine War. Isla mar, waan la yaabay sida Avengers ka xiranayo dhar cusub, fikirka in la yaabin lahaa laga yaabaa in goobaha laga beddelin in la siiyo aragti ah in xubno badan oo ka mid ah kooxda ku lug lahaa in howlgalka la mid ah.
Source source: Marvel Studios
Qalabka la sii daayay maalmo yar kahor, waxaan sidoo kale arki karnaa Rocket si isku mid ah oo cad. Guud ahaan 9 nin oo ah halyeeyada ayaa xiran lahaa dharka, haddii calaamad muujinaysa isbeddelada ka dhigi doonta naqshadeynta ugu dambeysa filimka waxay nagu dhiirigelisay in aynu ka fikirno in mid ka mid ah Hulk / Professor Hulk .  Ilaha sawirka: Marvel Studios
Laakiin Marvel marnaba lama sharaxin sababta ay u haysteen dharka iyo waxa ay u adeegaan. Dhamaanba, Rakaabka waa mid kasta oo dharkooda iska leh. Inkastoo ay ku dagaalameen koox ahaan sanado, haddana marnaba looma ciyaarin isku mid ah. Mid ka mid ah sababaha aan loo xirin dharka dharka dagaalka ee la midka ah ayaa ah in geesiyayaashu ay aad u sahlan yihiin si ay u aqoonsadaan muuqaal ahaan sababtoo ah dharkooda gaarka ah. Wax kasta oo adag ee taxanaha dagaalka, si fudud ayaad u kala saari kartaa iyaga sababtoo ah mid kasta oo ka mid ah waxay u egtahay waxa uu / ay dareensan tahay inuu ku raaxaysto.
Waxaan qiyaasid muddo bilo ah in, sida Hank iyo Ant-Man u baahan tahay si ay u noolaadaan safarka ee boqortooyada galmada, oo dhan avengers kale oo ku biiri doona Lang u baahan doontaa ilaalinta la mid ah. aragtiyaha qaar ka mid ah ayaa sheegay inuu isku darka doonaynin inuu iyaga sii noolaadaan meel, iyo waxay ka kooban yihiin nanoparticles la mid ah in Tony Stark isticmaalaa in uu Iron Man joog. guryaha ee dharka, kuwaas oo noqon doona ka badbaaday badbaaday cumaacumaha sharxi aragtiyahan, kaas oo kuu sharxi lahaa oo dhan sawirada oo dhan shaacin Endgame kuwaas oo soo bandhigay qaar ka mid ah Rakaabka ah oo isku midka ah oo lagu duubay curyaamiintooda. 19659009] Image Source: Marvel Studios
Taasi waa macluumaadka aan rasmiga aheyn ee ku saabsan suudhiga cad ee jira. Laakiin waa la yaabay usbuucan ugu dambeyntii waxa ay xirteen dharka dugsiga. Tababaraha Marvel Kevin Feige ayaa la hadlay ragga cusub ee wareysiga lala yeeshay io9 .
"Waxaan isla markiiba go'aansannay in [muujinayaan] in uu ahaa kala-duwaha muhiimka u dhexeeya [Endgame] iyo filimyada kale. Rakaabka ayaa marnaba horay u lahayn wax isu dhigma ka hor [sidaas]. Waxaan u maleyneynay inay ahayd sawir aad u xiiso badan oo lagu arko wax ka mid ah filimkaan oo dareemay farxad cusub. "
Feige ayaa sharxay in Marvel's iyo Disney's arimaha suuq-geynta ayan ahayn kaliya qarsoodi-xumida, laakiin ku saabsan sidii dadweynaha loo ogaan lahaa Endgame ma aha Dagaal-yahanka Infinity 2 laakiin filim madaxbannaan. Kaamiradu waxay ka caawisay taas.
"[Waxaan ku qasbannahay] inaan siinayno aragti ah in tani aysan ku koobnayn dagaalka ka dhanka ah Infinity War II. Sababtoo ah taasi maahan, "ayuu yiri. "Kooxdani waxay ku haboon tahay wax cusub. Sida Hawkeye, Captain Marvel sidoo kale. Sida Scott Lang. "
Xaqiiqda ah in Avengers ka badbaaday gashan dhar isku mid ah ayaa dira fariin awood leh. Iyadoo aan loo eegin waxa iyaga ka dhacay, waxay diyaar u yihiin inay iska dhignaan kala duwanaanshahooda waxayna ka shaqeeyaan sidii koox looga hortagi lahaa khatarta ugu weyn ee ay mar uun wajahaan.
Source source: Reddit
Eeg Tony iyo Steve oo ruxaya dharka kooxda ee goobo kala duwan waa calaamad muujinaya in waqtigii aan u dhimaneyno inaan aragno tan Dagaalka sokeeye hab. Labada hoggaamiye ee weerarka ayaa la kulmi doona markii ugu horeysay sannadaha sanadka waxayna xiran doonaan qurxiyo.
Ujeedada kharashka maaha oo kaliya in dadweynaha ogaadaan in Endgame waa filim cusub, ama Rakaabka ayaa aad u koray koox ahaan tan iyo filimkii asalka ahaa. Sidoo kale waa hubka shaqeeya. Sida la filayay, Feige ayaanan uga jawaabin wareysigaas. Waxaan hubin doonaa inaan sugno Abriil 26 si aan u ogaano waxa ay dharka u socdaan iyo Sababta Sababta loo abuuray. Stark ma abuuri karto isku-dhafan iyada oo aan haysan sababo macquul ah.
Meeqa-yaasha inta badan waxay ku soo xirtaan wakhtigooda iyadoo loo marayo wareegga wareegga? Ilaa iyo sagaal, haddii TV-yada ugu dambeysa ay sax yihiin, inkasta oo dhageysigu uu marin habaabin karo. Walaalaha Russo ayaa xaqiijiyay in ka badan hal jeer in gawaaridooda ay si ula kac ah u khiyaameeyaan bulshada si ay u ilaaliyaan qorshaha. Iyadoo maskaxda lagu haynayo, Joe Russo ayaa sidoo kale taabtay dharka kooxda ee wareysi isku mid ah, inkastoo uu xitaa la wadaago macluumaadka yar ee ku saabsan. "Sida iska cad, wax walba oo gawaarida geli kara si wanaagsan ayaa loo tixgeliyaa," ayuu yiri. "Dhammaan dadku waxay doonayaan in ay ka qaataan taas, way sameyn karaan."
Hantida ugu weyn ee muuqaalka Feige ayaa ah in dharka ay yihiin kuwo dhab ah, waxaa loo yaqaannaa dharka kooxda, waana arki doonaa iyaga. filimka.
Takhasusaha gaarka ah "Game of Thrones" ayaa muujinaya sida ay u keenaan ekaamyada nolosha - BGR
Endgame TV-yada waxay muujinaysaa, Mareegta xawaaladaha 20 ee dhagaystayaasha gaarka ah - BGR